ဖြစ်ရပ်ဆန်းလေးတစ်ခု!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » ဖြစ်ရပ်ဆန်းလေးတစ်ခု!!
Posted by politicalview on Aug 10, 2010 in Gossip, Rumor, Myanma News, News | 30 comments
ိုဒါမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ့မှာတော့ဖြစ်ခဲတယ် သိတဲ့အတိုင်းဘဲ ကိုရီးယားတို့ ဂျပန်တို့မှာသာအဖြစ်များတာ ဒီမှာ အခုလိုမျိုး ဖြစ်သွားတယ် အားလုံးအံ့ ဩ မိကျတယ်။ ကောင်လေးနံမည် က facebook မှာ ပြည့်စုံ နံမည် အ၇င်းကတော့ တင်အောင်ဝင်း ပါ အင်းစ်ိန်မှာနေပါတယ်။ သူမွေးနေ့ကတော့ 24.1.1989 ဆို တော့ အခု ဆို ရင် ၂၁ နှစ်ပေါ့ဗျာ။ ကောင်မလေးကတော့4oct 1988 မွေးတယ် သူထက် လပိုင်းလောက်ကြီးတာပေါ့။ ပြည့်စုံက Diploma In Network Engineer တက်နေတာ အပတ်စဉ် (17) မှာပါ။ ကျောင်း နံမည် က National Management College ဗိုလ်တထောင် ကပါ ။ ဗိုလ်တထောင် ဘုရားလမ်းမှာတည် ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့သိသလောက်ကတော့ facebook nick name Tar Tee Poe နံမည် အ၇င်း ဆုသဲ ဆိုတာနဲ့ငြိနေတာကြာပြီ ပြည့်စုံကတော့အ၇မ်းအ၇မ်းကိုချစ်တယ် ဆိုတာသိ၇တယ်။ စော် ကတော့ ကျောင်းကမဟုတ်ဘူး အပြင် ကပေါ့ တစ်ခါ တစ်ခါ ကျောင်းကို လာတယ် ပြီး၇င် သူတို့ taxi နဲ့ထွက်သွားကျတယ်ဆိုပါတော့။ အခု နောက် ဆုံးသိ၇တာတော့ စော် က july 19 2010 မှာ နောက် ထပ် ဘဲတစ်ပွေ Fros Ak (facebook nick name) ဆိုတာနဲ့ငြိသွားတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ အဲဒီဘဲ Fros Ak (facebook nick name) နဲ့ အတူတူ ဖတ်ထားတဲ့ ပုံတွေတင်လိုက်တယ်ဗျာ။ ပြည့်စုံ ကသူတော်ခံစားနေ၇ပုံပေါက်တယ်ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ 25 July 2010 sunday မှာ fmi က ဆံပင် ညှပ်ဆိုင်မှာ စော်ကို ကပ်ကြေးနဲ့ 5ချက် ပြီးတော့ လည်မျိုကို ဓားနဲက လှီးလိုက်တယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒီနောက်မှတော့ အဲဒီနေ့မှာဘဲ ဒီ ဘက်ကမ်းကနေ ဟိုဘက် သွားတဲ့ သမ္မာန်စီးပြီး အလယ်လောက်မှာ သမ္မာန်ပေါ်ကနေခုန်ချပြီး ကိုယ့်ကို ကိုယ် သေကြောင်းကြံသွားတယ်ဗျာ။ သူမှန်းဘယ်သိတာလဲဆိုတော့ သမ္မာန် ပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူအဝတ် သူ့ နာရီတွေကို နောက်ပိုင်းမှာသူအိမ်ကနေတွေ့ ခဲ့၇လို့အတည်ပြုလိုက်တာ။3၇က်မြောက်နေ့မှာ အလောင်းကို ပြန်ရခဲ့တယ်။ သဲဆုကိုယ်တိုင် က facebook မှာ ရေးထားတာတွေ့၇တယ် အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ “ဟာ သူရဲ့ ရီးစားပောာင်း ပုံတွေ အများကြီး ကို ဖျတ်ပြစ်သင့်တယ်’ “I should DELETE Lots of My Ex Pics…GaRRRRRRRRRRRRRRR!!! o_O “…………………………………. ဆိုပြီး သူမကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တယ်။ ပြည်စုံရဲ့ပေါက်ကွဲမှာကတော့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲဗျာ။ ပြင်းထန်တယ် ဒါပေမယ့် သူအ၇မ်းချစ်တဲ့သူ ကုို နောက်တစ်ယောက်ရင်ခွင်ထဲမှာ မြင်၇တာကတော့ သူအတွက် တော့အတိုင်း ထက်အလွန် ခံစား၇မှာပေါ့ဗျာ။ သူတို့ Links တွေကတော့ facebook မှာ
Pyae Sone က တော့ သူစော်ရဲ့ပုံကို တင်ထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ Tar Tee Poe (or) သဲဆု ရဲ့ နောက်ဆုံး facebook မှာ ရေးခဲ့တာက “ရူးနေပြီ”
တဲ့။ ဗမာပြည်မှာ ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာကတော့ဆန်းပါတယ်။ ခံစားချက်ပြင်းထန်မှုကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မမှားဘူးပေါ့ဗျာ။ နောက်ထပ် သိရရင်လဲတင်ပေးပါ့မယ်။
အရူးဘဲ ချစ်သူကို ဒီလောက်ချစ်မှာတော့ အနားမှာ ထားလို့ရအောင် မလုပ်ဘဲ သေရင် တူတူ နေရမှာ ကျနေတာဘဲ သေတော့လည်း တူတူသေတာမဟုတ်ဘဲ အခုလောက်ဆို ရေသရဲ ဖြစ်နေလောက်ပြီ။
ခံလိုက်ဦးပေါ့ အဖန်ငါးရာငါးကမ်ဘာ(five world)
ဒီတစ်ယောက်ကသစ်စာ မရှိတာများ ထားလိုက်စမ်းပါ
အော် ..ခက်လိုက်တာ။ခုခေတ်လူငယ်တစ်ချို့မှာ ဘယ်လိုအတွေးတွေ ရောက်ကုန်ပါလိမ့်…
လူသိတာရယ်၊ လူမိတာရယ်။ ရှက်တာရယ်။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်တာရယ်ရောထွေးသွားပြီး ထိမ်းချုပ်မရဖြစ်သွားပုံပေါ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ရော၊ယူကျူ့မှာပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမယ်ဆိုတာ ကြေငြာပြီး သတ်သေတာကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြပြီး စာရေးပြီး သတ်သေပြတဲ့သူတွေရှိနေလို့ပါ။
ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို စိတ်ပညာရှင်ဆရာဝန်တွေက ဂျာနယ်တွေမှာ သုသေသနလုပ်ရေးပြီး လူငယ်တွေကို ရှင်းပြပညာပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပညာပေးတွေမလုပ်ရင် ဒါမျိုးတွေ ထပ်လာလိမ့်မယ်..။
အချစ်သီချင်းတွေနဲ့ အချစ်ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ပြီး သိပ်ရူးချင်နေတာ နေမှာပေါ့လေ။
ချက်တင်တို့ ဖေစ်ဘုတ်တို့ အစရှိတဲ့ လူမူ့ရေးဝက်ဆိုဒ်တွေက အနုမြူ နဲ့တူနေပါပြီ။
အနုမြူကို စတင်သူ အိုင်းစတိုင်းက ဒီဒြပ်ပစ္စည်းလေးကို လောင်စာစွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုဘို့ စဉ်းစားဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်သူများကြောင့်လူသတ်လက်နက်ဖြစ်သွားလို့ ရင်နာစရာတွေကို သယ်ဆောင်လို့လာပါတယ်။
ဒီအင်တာနက်ဆိုတာကလဲ လူတွေဆက်သွယ်ရတာ ပညာရှာရတာ အလုပ်လုပ်ဘို့ချိတ်ဆက်ရတာကို လွယ်ကုစေအောင်ဖန်တည်းတီထွင်ထားပေမဲ့
လမ်းမှားလိုက်သူတွေကြောင့် သူလဲ အနုမြူလို ရင်နာစရာတွေကိုသယ်ဆောင်လို့လာပါပြီ။
ဒါဟာ သိပ်မှန်တယ် ။ သတိထားသင့်ကြပြီ ။ ဒီနေ့လူငယ်လေးတွေ အင်တာနက်ကို ချက်တင်ထိုင်တာအတွက်ပဲသုံးနေကြ
တယ် ။ကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးရှိသလဲ ။ပီးတော့ ဒါမျိုးတွေကြုံရရင် မိဘတွေရင်ကျိုးပီပေါ့ ။
လေးစားပါတယ် ကို ပြည့်စုံ၊ ခင်ဗျားအချစ် ဟာ စံတင်လောက်ပါတယ် ဗျာ။ သေချာတာတော့ ဘယ်သူမှ ခင်ဗျားလို မချစ်ရဲကြဘူးဗျာ။ တကယ်ကို ခင်ဗျားဟာ စံတင်ထားလောက်တဲ့ အချစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့တာပါဗျာ…. ဘယ်သူဘာပြောပြော၊ ဘာဝေဖန်ဝေဖန် ခင်ဗျားဂရုမစိုက်ဘဲ အချစ်ကို စံတင်ထားနိုင်အောင်လုပ်ပြတဲ့ လုပ်ရပ်ကို လေးစားမိပါတယ်။
နောက်ဆုံး လေးစားစွာဖြင့်ပြောလိုတာက “စောက်ရူး” လို့ပြောချင်တာဘဲ။
(မည်သူမျှ အကောင်းမပြောသဖြင့် ပြောပေးလိုက်ပါသည်။ ရောက်လေရာ ဘ၀မှာ ဆက်လက် စောက်ရူးလုပ်ရပ်တွေ လုပ်နိုင်ပါစေဗျာ။)
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကောင်းကျိုးတွေ ရှိသလို ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိလာတာပေါ့ဗျာ…
တကယ်ကို အဓိပါယ် မရှိတဲ့လုပ်ရပ်ပါ… အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာတင် ကမှာ မဟုတ်ဘူး… ပါဏာတိပါတကံပါထိုက်လို. ငရဲပါကျဦးမှာ..အချစ်သူရဲကောင်းအဖြစ် ငရဲမင်းကပဲ ဂုဏ်ပြုပြီး သူနဲ.ခေါ်ထားမယ်ထင်တယ်…
မိန်းခလေးတွေကအဲလို မျိူးဘဲမရူတ်သင်.ဘူးလေ။ သူတို.အတွက်လည်းအန္တရယ်များသလို တခြားသူတွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်။ မိန်းခလေးတွေအဲဒါကိုနားလည်ရင်ပိုကောင်းမယ်။ ပြည်.စုံကိုမှားတယ်လို.လည်းပြောလို.မရဘူး။ ဘာလို.လည်းဆိုတော.သူကအရမ်းချစ်ခဲ.တော. မမျှော်လင်.ဘဲ သူ.စော်နဲ.တခြားဘဲကိုတွဲရိုက်ထားတာကိုတွေ.တော. သူ.အတွက် ကမ္ဘာကြီးချာချာလည်သွားသလိုခံစားရမှာပေါ.။ ဒါမျိုးတွေကကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဘူးတော.ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ အချစ်ကြီးရင်အမြတ်ကြီးတယ်လေ။
ကျွန်တော်တို.လိုယောက်ျားလေးတွေတောင်စော်နှစ်ပွေကိုဘယ်တော.မှတပြိုင်တည်းမထားဘူး။ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အနေနဲ.ဆိုပိုပြီးဂရုစိုက်သင်.တယ်။ ဒါတွေက တကယ်. DANGER တွေလေ။ ဒီခေတ်မှာခေတ်ဆန်ချင်လို. လူအထင်ကြီးခံချင်လို.စော်တွေ ပွေး၊ ဘဲတွေပွေးတဲ. လူတွေအများကြီး…ရှိတယ်၊ သူတို.ဘ၀ဟာ ကိုကြည်.ရတာအရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ လူများအထင်ကြီးခံဖို.ပဲအပင်ပန်းခံနေကြတယ်။ အချစ်မှာခေတ်နောက်ကျတာတွေ ခေတ်ဆန်တာတွေမရှိဘူး။ အဲလိုတွက်နေရင် အဲဒီလူကအရမ်း ခေတ်ဆန်ချင်တဲ.စောက်ရူးလို.ပြောရမှာပါ။ လူတွေကအားနေရင်ခေတ်ကိုပဲ ဆွဲဆွဲထည်.နေကြတယ်။ ခေတ်ကဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်နေပါစေ၊ လူဆိုတာလူပဲ ခံစားချက်တွေရှိတယ်၊ အဲဒီခံစားချက်ကို ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရရင် သည်းခံတဲ.သူကသည်းခံလိမ်.မယ်၊ သည်းမခံနိုင်တဲ.သူတွေနဲ.တွေ.ရင်တော……….
Love is blind. So says the saying. Love can rob us of our sense and sensibility. The boy was wrong in killing his girlfriend and then committing himself. Nothing is permanent and our feeling for someone can change. The right way for him was to talk the girl to his side again. The alternative was just to give up. Time would heal his wound and he would find new love.
အော်..သူ့လည်း အချစ်ကျေးကျွှန်ဖြစ်သွားတာဘဲ…ခံစားချက်ပေါ်မှာ စိတ်ကို လွတ်ပေးလိုက်တာကို…
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတ္တအရမ်းကြီးလို့ ဒီလိုအဖြစ်ပျက်လေးနဲ့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရရှာတာပေါ့…
ဒီအဖြစ်ပျက်ကို ဂဃနဏ မသိတော့လည်း ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ်ကို သေချာမပြောနိုင်ဘူးလေ…
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး နားလည်မှုရှေ့တန်းတင်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုအဖြစ်ပျက်မျိုးက
ဟို……..အဝေးကြီးမှာပါ…သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူဘ၀လေးက ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရင်တောင်….. သူငယ်ချင်းဘ၀လေးနဲ့ ပျော်စရာလေးတွေတောင် ကြည်နူးနိုင်ပါသေးတယ်လေ…စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ….
ဒီလိုဝမ်းနဲစရာ အဖြစ်လေးကို သင်ခန်းစာယူသင့်တာတော့ အမှန်ဘဲ…
ဒီအဖြစ်လေးက စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာ…. :-(
ယနေ့ လူငယ်တွေ အတုယူမမှားစေလိုပါ။ ဆရာကြီးလုပ်တယ်တော့မထင်ကြပါနဲ့။
ရင်နင့်စရာပါပဲ .. ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ ခုလောက်ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရတာလို့ ထင်တယ် .. ဒီကိစ္စသာ (ခုရေးထားသလောက်သာ အမှန်တွေဆိုရင်) အားလုံးအပြစ်မကင်းပေမယ့် ပြည့်စုံကိုတော့ သနားတယ်.. ကြည့်ရတာ ဒီကိစ္စတွေအပြင် တခြားလူမှုရေး ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ထား၇မယ်ထင်ပါတယ် .. ကောင်မလေးကိုတော့ ရွံတယ်.. အသတ်ခံရတာ နည်းသေးတယ်..
ချစ်တာချစ်ပါ မရူးပါနဲ့ မမူးပါနဲ့…. ဟိုသီချင်းလိုပေါ့ဗျာ အရက်ကပြေလွယ် မူးတဲ့အချစ်ကဖြေဆေးမရှိတဲ့ ….
လူမှုေ၇း ဆိုဒ်တွေဝင်တယ် chatting ထိုင်တယ် ၊ ဒါတွေကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကတော့မဟုတ်သေး
ဘူးနဲ့တူတယ် အဓိက ကတော့သုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ခံယူချက်ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘိန်း ဟာမကောင်းပါဘူး၊ မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဘိန်းကိုအခြေခံပြီး ထုတ်ထားတဲ့ဆေးတွေဟာ အလွန်စွမ်းပါတယ်။
သုံးစွဲတဲ့သူ အပေါ်မူတည်တာပါ ဘယ်ဘက်မှာသုံးမလဲ……
ဟုတ်ပါတယ် unclegyi1974ရေ။ ခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်ဗျာ။
Di kaung taw taw nu thay tar pae..
Do not ever believe any women until they are in grave.. never.. it isatheory ..
take care women.. they are…innnn…
တော်တော်များများက အင်တာနက်ကို ရည်းစား
အခုဆိုလည်း FB က ဓာတ်ပုံတင်လို့အဆင်ပြေ
ကိုရီးယား ကားတွေကြည့်၊ စိတ်ကူးယဉ်၊ ကို့လူမျိုးနဲ့မအပ်ဆတ်တာတွေလိုက်လုပ်၊ ဟုတ်နေတာပဲ။ စော်ကလဲနန့်ပါတယ်။ ကိုမကြိုက်လို့ ချစ်သူအသစ်ရှာတယ်ဆိုလဲ၊ ကိုကမြန်မာ မိန်းကလေးပဲ(နိုင်ငံခြားသူမှမဟုတ်တာ) အရှက်မရှိ လူသိကြား လုပ်စရာလား။ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုဆုံးတော့ဆုံးမသင့်ပါတယ်။ သို့သော်ဆုံးမလိုက်တဲ့ပုံ ကလွဲနေတယ်။
ပြည့်စုံ ခုလိုလုပ်လိုက်တော့သူ့ အသက်ပါဆုံးသွားရတာပေါ့။ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုး အတွက် လုံးဝမတန်ပါဘူး။ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုး ဒီလိုလုပ်ရင်ကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး၊ စောင့်ကြည့်နေရုံပါ၊ အချိန်တန်တို့ သူ့ကိုလူတိုင်းက စွန့်ခွါသွားတာတွေ့ရမှာပါ(နွားများမှလွဲ၍)။
ဒါနဲ့အဲဒီ Fros Ak (facebook nick name) ဆိုတဲ့သူရောတွေ ဖြစ်သေးလဲ။ သီတင်းလေး ဆက်ပါအုန်း။
သက်သက်ကြောင်တာပါကွာ တန်ဖိုးမရှိသစ္စာမစောင့်သိတဲ့မိန်းမအတွက်ဘာများစတေးရမှာလည်း ။ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုကတော့ နှမျောမှာပဲ။